धरहराको टुप्पोबाट भुइँमा बजारिदा पनि जिबित रहेकी रमिला सम्मानित ! – Anusandhan Online
मुख्य पृष्ठ /News/धरहराको टुप्पोबाट भुइँमा बजारिदा पनि जिबित रहेकी रमिला सम्मानित !
धरहरा भत्किँदा पनि बाँच्न सफल भएकी रमिला श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान गरेका छन् । शनिबार पुनर्निर्मित धरहराको उदघाटन कार्यक्रममा बल्खु काठमाडौंकी श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको हो । २०७२ वैशाख १२ गते धरहरामा चढेर काठमाडौं उपत्यका अवलोकन गर्नेक्रममा भूकम्प जाँदा उनी घाइते भएकी थिइन् ।
गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पमा धरहरा पूर्णरुपमा भत्किएको थियो । धरहरा क्षेत्रमा मात्रै ६० जनाको ज्यान गएको थियो । भूकम्पमा परी देशभर ८ हजार ९ सय बढीको ज्यान गएको थियो भने कयौं भौतिक संरचना नष्ट भएको थियो । धरहराको उदघाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणमा योगदान पुर्याएकाहरुलाई पनि सम्मान गरेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २० औं तलामा रहेको बाल्कोनीबाट पुष्पवृष्टि गर्दै धरहराको उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।२०७२ बैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले धरहरा ढल्दा ६० जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । सो भूकम्पमा भत्केको धरहरको ठुटो संरक्षण गर्दै नजिकै नयाँ धरहरा बनाइएको हो ।
यद्यपि धरहराको सबै निर्माण कार्य सम्पन्न भने भइसकेको छैन । हतारहतार बाहिरबाट देखिनेगरी धरहरा ठड्याइएको भए पनि भित्री कामहरु, बेसमेन्ट तथा पर्खाल र अन्य संरचना निर्माण्, सजावट, भूकम्प सङ्ग्रहालय निर्माण लगायत काम बाँकी नै छन् ।
साथै लिफ्ट प्रविधि समेत राखिएकोले यसको काम पनि सम्पन्न बाँकी छ, धरहरामा जडान गरिने दुईवटा लिफ्टमध्ये एउटा तयार भइसकेको र अर्को जडानको क्रममा रहेको जनाइएको छ । धरहरा निर्माणको ठेक्का रमन कन्सट्रक्सनले पाएको थियो ।१८८२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले आफ्नी प्रेमिकाका लागि भनेर धरहरा बनाइएको थियो ।
वि.स. १९९० सालमा आएको भूकम्पले ११ तले धरहरा ९ तल्लेमा सीमित भयो । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरले ९ तल्लाबाट ११ तल्ले बनाए । र, २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहरा पुनः २०७८ मा २२ तल्ले बनाइएको छ ।
यो धरहरा पुरानो भन्दा फरक किसिमले बनाइएको भए पनि बाहिरबाट हेर्दा पुरानैजस्तो देखिन्छ । पहिलाको धरहराभित्र खालि सिँढी मात्र थिए भने अहिले भित्र संग्रहालय लगायत संरचना रहने बताइएको छ । यसमा माथि चढ्नका लागि सिँढीका साथै लिफ्ट प्रविधि छ, भित्र पुस्तकालय समेत रहनेछ ।
सारीका प्रसाईंले जितिन् टिन च्याम्पको उपाधि